Zyro: Ngwa ngwa wulite saịtị gị ma ọ bụ ụlọ ahịa n'ịntanetị site na iji Platform a bara uru | Martech Zone
Zyro: Jiri Platform dị ọnụ ala wulite saịtị gị ngwa ngwa
Tọzdee, Nọvemba 11, 2021 Tọzdee, Nọvemba 11, 2021 Douglas Karr
Nnweta nyiwe ahịa dị ọnụ ala na-aga n'ihu na-adọrọ mmasị, yana usoro njikwa ọdịnaya (CMS) adịghị iche. M na-arụ ọrụ na a ọnụ ọgụgụ nke proprietary, oghe-isi iyi, na-akwụ ụgwọ CMS nyiwe ihe karịrị afọ… ụfọdụ ịrịba na ụfọdụ nnọọ ike. Ruo mgbe m ga-amụta ihe a ahịa 'ebumnobi, akụrụngwa, na usoro bụ, Anaghị m eme nkwanye na nke ikpo okwu nagide.
Ọ bụrụ na ị bụ obere azụmahịa nke na-enweghị ike ịkwụ ụgwọ iri puku kwuru iri puku dollar na ọnụnọ weebụ, ọ ga-abụrịrị na ị ga-eji nyiwe dị mfe nke na-achọghị koodu nzuzo ma nwee nnukwu nhọrọ nke ndebiri iji hazie onwe gị.
Mgbe m guzobe a ebe spa Otu afọ gara aga, ejiri m ikpo okwu m maara na ọ ga-enye nkwado na ngwaọrụ nhazi nke onye ahịa m chọrọ. Enweghị ụzọ m ga-esi wuo saịtị nke chọrọ nrụzi mgbe niile, mmelite, na njikarịcha na-aga n'ihu… ebe onye nwe ya enweghị ike ịkwụ ụgwọ maka ọkwa mbọ ahụ.
Zyro: Wulite Weebụsaịtị, Ụlọ Ahịa Ọnlaịnụ, ma ọ bụ Pọtụfoliyo
Otu ngwọta dị oke ọnụ ahịa bụ Obinna. Zyro nwere ọnụ ahịa gụnyere yana enweghị ihe egwu, nkwa azụta ego ụbọchị 30. Ị na-enweta nkwado nkata ndụ 24/7 na atụmatụ ọ bụla!
mba - Ọ dịghị mkpa ịga nweta onye na-eweta nnabata, ikpo okwu Zyro bụ ihe niile gụnyere. Ị nwere ike nweta ngalaba gị site na ọrụ ha n'efu na ụfọdụ ngwugwu.
Templates - A na-ahazi ndebiri Zyro niile ma na-anabata ekwentị. Malite na ndebiri oghere, ma ọ bụ họrọ site na ndebiri ụlọ ahịa, ndebiri ọrụ azụmahịa, ndebiri foto, ndebiri ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ndebiri Pọtụfoliyo, ndebiri malitegharịa, ndebiri mmemme, ndebiri ibe ọdịda ma ọ bụ ndebiri blọgụ.
Dọrọ Dọrọ na Dobe - Enweghị koodu dị mkpa, ị nwere njikwa okike zuru oke yana ndebiri emebere nke enwere ike ịhazi ya na ika na ozi gị.
Nchọpụta Nchọpụta Nchọpụta - nke Zyro ikpo okwu njikwa ọdịnaya nwere atụmatụ niile dị mkpa ka ebuli gị saịtị ma ọ bụ na-echekwa maka search engines.
AI Onye edemede - Ọ bụghị ezigbo onye edemede? Naanị enweghị ike ịchọta oge iji dee? Ka AI Writer wepụta ederede maka weebụsaịtị gị mgbe ị na-ewu ya.
ecommerce - ngwugwu ecommerce zuru oke, gụnyere nhazi ịkwụ ụgwọ, ntinye mbupu, onye njikwa mmekọrịta ndị ahịa (CRM), ozi-e akpaaka, na mkpesa. Enwere ike itinye ụlọ ahịa gị n'ụzọ dị mfe na Amazon, Facebook, na Instagram.
Security – A na-echekwa saịtị ahụ nke ọma site na asambodo SSL gị yana izo ya ezo HTTPS, echekwarakwa azụmahịa ecommerce.
Nkọwa miri emi - Chọpụta ebe okporo ụzọ si abịa wee bulie mgbanwe gị site na iji ngwaọrụ dị ka Google Analytics, Kliken, na MoneyData.
Zyro nwere atụmatụ dị ọnụ ala na-enweghị ego zoro ezo.
Zyro nwere onyinye Friday ojii nke na-amalite site na Nọvemba 15 ruo Disemba 7… jiri koodu ZYROBF ma chekwaa ihe ruru 86%!
Gbalịa Zyro n'efu!
Ngosi: Abụ m Mgbakwunye maka Obinna na m na-eji njikọ njikọ m na edemede a.
Tags: Amazon ụlọ ahịaCMSusoro njikwa ọdịnayamee onwe gịdomaindrag-and-dop editorecommercenjikarịcha ecommerceecommerce n'elu ikpo okwuahiaazụmahịa instagramNdepụta Ngwaahịaatọ ndị yiri nkata managementonline ụlọ ahịaonye na-ewu ụlọ ahịa n'ịntanetịonline ụlọ ahịa n'elu ikpo okwuonye na-ewu weebụsaịtị n'ịntanetịnjikarịchaPọtụfoliyo saịtịAọrụ mbupuazụmahịa azụmahịandebiri webusaitiziro
Circleboom Bipụta: Nhazi, Atụmatụ, Nhazi, wee rụzie ahịa mgbasa ozi Ọha na eze gị
SocialBee: The Small Business Social Media Platform na Concierge Services